5-tii Qaab Xiirrimaad Ee Gadhka Loo Goostay Ee Ugu Layaabka Badnaa Dunida Sannadkan 2016 - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle 5-tii Qaab Xiirrimaad Ee Gadhka Loo Goostay Ee Ugu Layaabka Badnaa Dunida...
5-tii Qaab Xiirrimaad Ee Gadhka Loo Goostay Ee Ugu Layaabka Badnaa Dunida Sannadkan 2016
Mareeg lagu baahiyo dhacdooyinka xiisaha leh oo laga leeyahay wadanka Maraykanka ayaa shaacisay 5-tii nooc xiirrimaad ee gadhka loo goostay sannadkan sii tagaya ee ugu layaabka badnaa 2016, taasi oo ay gadhka u goosteen muwaadiniin Maraykan ah. Arrinta layaabka lihi waxa au tahay mudada iyo wakhtiga ay raggaasi ku bixiyeen habaynta gadhkooda iyo hadba astaanta ay muuqaal ahaan timaha gadhkooda u jarteen oo layaab leh. Mareegtan oo lagu magacaabo Fun4you. ayaa waxa ay inoo soo gudbinaysaa shantii qaab ee xiirrimaad ee dhinaca gadhka ragga ah ee muuqaalkoodu ugu layaabka badnaa sannadkan sii socda ee 2016 waxaanay kala yihiin:
– Armin Belfield: Waa muwaadin Maraykan ah oo ku nool deegaanka Georgia waxaanu habaynta gadhkiisa ku qaataa ku dhawaad 6 saacadood maalintii. Armin waxa uu aad u jecel yahay in uu gadhkiisa u jarto ama u ekaysiiyo xayawaanka badda ku nool ee loo yaqaano Scrap waxaanu muuqa timaha gadhkiisa ka dhiga midabka dambaska.
– Daniel Labor: Daniel waa nin dhalasho ahaan ka soo jeeda Mexico, Maraykankana ku nool. Waxa uu muuqaalka gadhkiisa jecel yahay in uu u ekaysiiyo muuqaalka muraayaddiisa indhaha. Muuqaalka xiddigta ah ee ay leedahay Muraayaddiisa Indhaha ee uu cadceeda ka xidhaa ayaa noqotay arrinta uu u ekaysiiyo timaha gadhkiisa.
– Justin Klemerser: Ameerikaan ugu yaraan shan saacadood ku mashquula gadhkiisa in uu u xiiro qaaka layaab leh ee sida shabagga u samaysan.
– Caharlie Sville: waa muwaadin Ingiriis ah oo ku nool magaalada New York. Waxa uu mar walba jecel yahay in uu gadhkiisa sidan layaabka leh u habeeyo. Waxa uu qaabkiisa u ekaysiiyay sidan aad layaabak u leh ee wada duuduuban.
– Muuqaalka ugu dambeeyaa waa ninka lagu magacaabo Peter Strong oo u dhashay Russia balse haysta jinsiyadda Maraykanka. Waxa uu jecel yahay in uu muuqaalka gadhkiisu ahaado mid soo jiidasho leh. Marka uu suuqyada marayo dadku aad ayay ula yaabaan kuna soo ururaan iyaga oo sawiro la galaya, waxaanu sheegaa in awawgii sidan u xiiran jiray una habaysan jiray gadhka.
Somaliland: Shimbiraha Dad Qaadka Ah Oo Isku Faafiyay Deegaanada Bariga Somaliland Iyo Soomaalida Itoobiya Iyo Weeraro Cusub Oo Ay Gaysteen